Carlos Ghosn: Tafaporotsaka any Liban
mercredi, 01 janvier 2020 14:47
Noho ny raharaha kolikoly sy tsy fandoavan-ketra, dia notazonin'ny fitsarana japoney am-ponja ity Filoha Tale Jeneralin'ny Ranault-Nissan ity, nahazo fanalefahana izy taty aoriana, ka nahazo nivezivezy, fa naraha-maso fotsiny tamin'ny trano fonenana nasiana azy (résidence surveillée), nahazo nivezivezy izy, fa tsy maintsy mipoitra isaky ny telo andro.
Fa akory ny hagagan'ny mpitondra japoney, fa efa any Liban izy ny talata teo no nanao fanambarana fa tsy nandositra izy, fa afaka tamin'ny fanagejana sy ny fitazonana tsy an-drariny.
Tsy fantatra mazava hatreto ny fomba nahafahany niala tany Japon, fa tany Turquie izy no niainga tamin'ny fiaramanidina manokana, nihazo an'i Liban, ary niditra tamin'ny pasipôro frantsay sy kara-panondro libanais izy, satria zanaky Liban i Carlos Ghosn.
Ny faram-paran'ny volana novambra 2018, vao nidina ny fiaramanidina nitondra azy tao Japon ity Tale jeneralin'ny Ozinina mpanamboatra fiarakodia ity, no notsenain'i polisy japoney.
Avy hatrany dia notazonina nanaovana fanadihadiana momba ny tsy fandoavana hetra tamin'ny 37 tapitrisa Euro karamany. Misy ihany koa ahiahy amin'ny fanararaotana ny volan'ny orin'asa tamin'ny fividianana trano tany France, Pays-Bas, Rio de Janeiro Brésil, Beyrouth Liban nefa tsy nampiasain'ny orin'asa fa nampiasainy manokana.